डा.भट्टराईको टिप्पणीः ‘पोहोर मरिन् सासू ऐले आयो आँशु’ ! | suryakhabar.com
Home राजनीति डा.भट्टराईको टिप्पणीः ‘पोहोर मरिन् सासू ऐले आयो आँशु’ !
on: १२ माघ २०७७, सोमबार ०७:१२ In: राजनीति, सामाजिक सञ्जालTags: No Comments
१२ माघ, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघिय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले पूर्वमाओवादी लडाकुलाई लोकतन्त्र योद्धाका रुपमा सम्मान गर्ने सरकारको निर्णय प्रति टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीट माफर्त पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा.भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
यस्तै उनले उनले आफ्नो पालामा जारी टिआरसि र वेपत्ता सम्बन्धी आयोगको अध्यादेश, द्वन्दपीडितलाई ५ लाख नगद प्लस, ५ लाख तामाकोशीमा शेयर र ससम्मान परिचय पत्र, बहिर्गमित लडाकुलाई २ लाख राहत आदि पछिल्ला सरकारले किन रोकेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।
साथै उले ऐले गोहीको आँसु चुहाउॅदै उधारो समिति गठन टि आर सि टार्ने मेसो हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सरकारले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागी भएर प्रभावित भएकाहरुलाई सम्मान र परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको प्रति उनले यस्तो ट्वीट गरेका हुन् ।
उनको ट्वीटः ‘पोहोर मरिन् सासु ऐले आयो आँसु’ ? मेरो पालामा जारी TRC वेपत्ता सम्बन्धी आयोगको अध्यादेश, द्वन्दपीडितलाई ? ५ लाख नगद प्लस ? ५लाख तामाकोशीमा शेयर र ससम्मान परिचय पत्र, बहिर्गमित लडाकुलाई रू२लाख राहत आदि पछिल्ला सरकारले किन रोकेकोरुऐले गोहीको आँसु चुहाउॅदै उधारो समिति गठन ? TRC टार्ने मेसो ?
राष्ट्रिय महिला फुटबलः सावित्राको चार गोलको मद्दतमा एपिएफ विजयी
ओलीको चेतावनीसंग नडराई संसद बिघटन बिरुद्धको सर्बोच्चको फौसला निष्पक्षः डा महत
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १७:४१
राजनैतिक संकट टर्यो तर चरम भ्रष्टाचार, संविधानको नग्न उल्लंघन प्रवृत्ति बाँकीः दमन
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार ११:३२
१२ माघ २०७७, सोमबार ०७:१२